China FOTON U12D ifektri abakhiqizi | Izithombe
Umqeqeshi webanga le-Foton 12m ukubonakaliswa okuphezulu kwekhwalithi, ukuphepha, ukuthembeka, ukusebenza kahle okuphezulu, ukuphekela izidingo zemakethe ngobuntu bayo obuqinile nomthelela wokubuka.
Ubukhulu Sekukonke 12000 * 2550 * 3790
Nciphisa Isisindo 13T
Ukuhlala Umthamo I-32 + 1 + 1/49 + 1 + 1
Ukwakheka komzimba I-Monocoque / Semi-monocoque
Izinga Lokukhishwa I-EURO II - EURO V
Igumbi leLuagge 10 m3
Udonga olungaphambili lomqhele omise okomqhele kakhulu: idizayini enhle nenhle, ekhombisa isimilo sayo esihle; Isivikelo somoya saphezulu: esine-50 degree caster angle yokumelana nomoya ophansi, ebalulekile ekongeni amandla; Udonga oluseceleni: idizayini ehlehlisiwe enezici ezinamandla nezimfushane.
I-powertrain yegolide Ihlangana nenjini yeCummins ISG, ukudluliswa kwe-ZF, i-SACHS clutch ne-WABCO ABS ne-ESC (ngokuzithandela), kugqamisa ukusebenza okuhle kakhulu nokukhipha okuphansi.
Ohola design engasindi futhi Modular;
Ubuchwepheshe bejet ephezulu engu-2000bar;
Ukuphayona inqubo entsha nezinto zokwakha.
Isisindo esincane, izindlu ze-aluminium;
Ukukhishwa komsindo ophansi ngamagiya we-helical alungiselelwe;
Ama-synchronizers angenasondlo ngaphezu kokuphila kokudlulisela okugcwele;
Ukugcwaliswa kukawoyela impilo yonke kuyatholakala.
Isiza ukunweba impilo yamathayi kuze kufike ku-10%;
Kwandisa ukulawula i-trailer ngesikhathi sesimo esiphuthumayo;
Isiza ukugwema ukuxegiselwa kwe-trailer kanye ne-jackknifing ngenkathi ibhuleka;
Kukhulisa ukusebenza kwamabhuleki kukho konke
I-coefficient engapheli yokushayisana;
Ukusebenza kokuzibandakanya okushelelayo;
Ukumelana nokushisa okuphezulu (ukuphela);
Izinga lokugqoka eliphansi & ukuzinza kwejubane eliphakeme;
Akukho ukuthambekela kokusonteka;
Iyahambisana nemvelo ekukhiqizeni futhi
Insimbi enamandla kakhulu i-alloy steel isetshenziswa ngamandla aphezulu wesivuno akhuphuke ngo-50% kunalawo wensimbi ejwayelekile. Ngokumelana namazinga okushisa aphansi amahle nesakhiwo esiqinile, kuqinisekisa ukuphepha kokushayela.
Uhlobo lomzimba we-Truss wohlobo lomzimba we-monocoque nokwakhiwa kwe-loop-loop, ngamandla we-torsional athuthukiswe ngama-50%, kunikeza umshayeli nabagibeli ithuba lokushayela ngokunethezeka futhi eliphephe kakhudlwana kanye nesipiliyoni sokugibela.
Inqubo ye-state-of-the-art electrocoating ithuthukisa kakhulu ukusebenza kwe-anti-corrosion kanye nobuhle obuhlala njalo bamabhasi.
Igumbi le-Injini lifakwe i-alamu lokushisa lokuqapha ngesikhathi sangempela nedivayisi yokuzicisha ukufeza ukuqapha kwesikhathi sangempela; izinto ezingamelana namalangabi nezinto ezimelana namalangabi ezinokusebenza okungcono kokuphepha zisetshenziswa ezungeze umthombo wokushisa.
Amabhasi we-Foton adlula ekuhlolweni okunzima kwezimoto nokuhlolwa kwe-rollover ngaphezu kwamakhilomitha ayizinkulungwane eziyi-100 esimweni sezinhlobo zemigwaqo ehlukahlukene nangaphansi kwezimo zezulu ezinzima kakhulu njengokushisa okuphezulu, izinga lokushisa eliphansi noma ingcindezi ephansi.
I-Foton ingumnikazi wezintambo zikazwelonke ezisezingeni elijwayelekile zokufakwa kwedijithali, isivinini sokuhlolwa kwejubane, umbhede ohlangothini lwe-sideslip, umthwalo we-axle, umbhede wokuhlola we-ABS, uhlelo lokutholwa kokuhlolwa kwamabhuleki nabanye, Ukuqinisekisa isitifiketi nokugunyazwa okuvela kwi-TUV Rheinland yase-Germany nase-CNAS laboratory kazwelonke.
Ngesakhiwo esiqinile, amabhasi akwaFoton amelana nokushayisana ohlangothini nokushayisana ngamakhanda kanye nokuvimbela ukugingqika eceleni. Ngaphambi kokungena enkonzweni, bavivinywa kanzima futhi baqinisekiswa.